DOSBox: Sidee loo adeegsadaa luqadaha barnaamijka DOS ee GNU / Linux? | Laga soo bilaabo Linux
Kuwa aan isticmaalno GNU / Linux Distros badanaa, waxaan badanaa isticmaalnaa terminal (konsole), halka dhowr adeegsade oo keliya Windows badanaa way sameeyaan. Kaliya qaar ka mid ah isticmaaleyaasha ugu da'da weyn ayaa ah kuwa aqoonta u leh isticmaalka, sidoo kale, maxaa yeelay softiweer horumaray ama ciyaaray ciyaarihii hore ee hore.
Markii hore, isticmaalayaal badan oo ka mid ah GNU / Linux ku guuleystey inuu maamulo luqadihii hore ee barnaamijyada sida ama ciyaaro terminal ah DOS iyadoo la adeegsanayo DOSEmu, laakiin mashruucani hadda ma sii firfircoon yahay, Relay-na waxaa la wareegay dalabka DOSBox, oo u oggolaanaysa isticmaale kasta inuu dib u abuuro waqtiyadaas.
Marka laga hadlayo DOSEmu, oo macnihiisu yahay Ku dayashada DOS, ayaa sheegay in arjiga loo ogol yahay inuu socdo a Nidaamka Howlgalka ee DOS iyo barnaamijyo badan oo DOS ah, oo ay ku jiraan barnaamijyo badan oo DOS ah DPMI (DOS Wajahadda Habka La Ilaaliyo o Wajahadda Habka La Ilaaliyay ee DOS) sida ciyaaro fudud oo nooca ah cadaab in software adag sida Windows 3.1, hoose GNU / Linux. Taasina waa sababta, waxay ku habboonayd in lagu socodsiiyo kuwa luuqadaha barnaamijyada hore ee sidoo kale ka hoos shaqeyn jiray DOS, sida Foxpro, Pascal iyo C, iyo kuwo kale oo badan.
Si kastaba ha ahaatee, DOSEmu hadda waxay leedahay horumar is barbar socda, oo loo yaqaan DOSEmu2 kaas oo la cusbooneysiiyay, oo laga heli karo xiriirka soo socda: DOSEmu2.
Bedelkii, DOSBox waa barnaamij casriyeysan oo casriyeysan oo leh ujeedo isku mid ah, taasi waa, waa a Emulator DOS kaas oo adeegsanaya Maktabada SDL, taas oo ka dhigaysa taas DOSBox noqo mid aad u fudud in lagu rakibo barnaamijyada kala duwan, sida Windows, BeOS, GNU / Linux, MacOS X, iyo kuwo kale.
Sidoo kale, DOSBox sidoo kale ku dayashada ah Habka processor: 286/386 dhab ah / ilaalin ah, Tusayaasha 'XMS / EMS File Systems', Tandy / Hercules / CGA / EGA / VGA / VESA graphics, iyo kaararka codka SoundBlaster / Gravis Ultra Sound, si loo gaaro a waafaqid fiican Erayada leh barnaamijyadii hore, gaar ahaan Ciyaaraha DOS.
1.1 Ku rakib DOSBox
1.2 U habee oo isticmaal DOSBox
Ku rakib DOSBox
DOSBox firfircoon ee kala duwan DEBIAN GNU / Linux Distros, sida aad ku arki karto waxyaabaha soo socda isku xirkaSidaa darteed, si fudud ayaa looga rakibi karaa terminal (konsole) adoo isticmaalaya qadka amarka soo socda:
sudo apt rakibi dosbox
Si aad u socodsiiso, waxaad si fudud u raadin kartaa liiska barnaamijka ee arjiga Emulator DOSBox oo orod. Badanaa barnaamijkan waxaa loo duubay sidii barnaamij qayb ah. «Ciyaaraha». Ama fulin ka timi terminal (console) isticmaalaya amarka soo socda:
U habee oo isticmaal DOSBox
Marka la furo ama la maamulo, kaliya ayadu buugga tooska ah ama terminal (nin dosbox) ama la tasho adiga -Leaks, si loo bilaabo isticmaalka. Si kastaba ha noqotee, waxa ugu weyn ee la sameeyo si loo bilaabo isticmaalkiisa waa in la dhejiyo a dalwaddii wadista (Disk) C halkee ku kala duwanaan doonaan Barnaamijyada DOS (jawiga barnaamijyada, ciyaaraha iyo codsiyada kala duwan) taasi waa la fulin doonaa. Sida hoos ka muuqata:
Nota: Faylka "Appdosbox" qaadi karaa magaca aad dooratay, magaca ah "Folderx" waa in lagu bedelaa magaca galka Barnaamijka DOS (jawiga barnaamijyada, ciyaaraha iyo codsiyada kala duwan) in aad horey ugu soo guurisay si loo fuliyo, iyo magaca amarka "Fulinta.exe" Waa inuu noqdaa midka u dhigma fulinta oo la fulin karo si loo bilaabo. Kiiskeena, waxaan ka soo guurineynaa gal FoxPro ee DOS.
Ugu dambeyntii laakiin ugu yaraan, DOSBox kugula talineysaa Qaybta soo dejiso, isticmaal qaar Iskuxirka sawirka (Frontend) si loo maareeyo loona beddelo kan luqadda interface luqaddaada maxaliga ah, si aad si fiican ugu isticmaasho. Iyo inkasta oo ay jirto, in Horyaallada hore ma diiwaan gashan DBGL, tani waa mid aad u wanaagsan oo sahlan in la isticmaalo mid.
Sida la arki karo, DOSBoxWaa a Emulator heer sare ah in barnaamij ka ahaa luqadihii hore ee barnaamijyada DOS ee Windows gabi ahaanba waa shaqeyneysaa. Kaliya waxay ku hartaa raadinta iyo soo dejinta kuwa lagama maarmaanka ah Internet fulintiisa.
Waxaan rajeyneynaa tan "waxtar yar post" ku saabsan «DOSBox», qalab nooc terminal waxtar leh, fududahay in la rakibo oo loo isticmaalo on our Nidaamyada Hawlgalka Bilaashka ah iyo Furfuran, taas oo noo ogolaaneysa inaan fulino Codsiyada DOS ee barnaamijka Windows, sida luqadaha iyo ciyaaraha barnaamijyada hore, noqo mid dan weyn iyo dan u leh, dhammaan «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» iyo wax ku biirinta baahinta ee nidaamka deegaanka ee cajiibka ah, weyn iyo sii kordhaya ee «GNU/Linux».
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » DOSBox: Sidee loo adeegsadaa luqadaha barnaamijka DOS ee GNU / Linux?